Disposable masiki Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Masiki anogadziriswa anoitwa anopfuura matatu matatu magiramu makumi maviri nemasere emachira asina kuvezwa; bhiriji yemhino rakagadzirwa nenharaunda-inoshamwaridzika-mapurasitiki mitsetse, isina simbi, yakagadzirirwa kufema, uye inonyanya kukodzera mafekitori emagetsi uye kushandiswa kwezuva nezuva. Masiki anoraswa (masks ekuvhiya) anokwanisa kudzivirira kutapukira kune imwe nhanho uye haagone kudzivirira maziso. Ndokumbira utarise kana uchitenga, iwe unofanirwa kusarudza mask pane iyo yekutanga package yakanyorwa chaizvo "Medical upasuaji Mask".
Saizi 17.5cmx9.5cm, makumi mashanu zvidimbu / bhokisi, 2000 zvimedu / katoni, masiki ekurasa anokamurwa kuita zvimedu zvitatu-maseru masiki, anoraswa zvisiri-zvakarukwa masks, kuraswa mana-musara masks, kuraswa activated kabhoni masks.
Disposable matatu-masiki masiki anogadzirwa nezvikamu zviviri zvemukati zvisina mucheka mucheka uye pepa remhepo. Disposable matatu-masiki masiki anogadzirwa nezvikamu zviviri zvemafunguru asina kuvezwa machira anoshandiswa nehunyanzvi kurapa uye hutano. Kupfuura%% yefaiputi kupukuta jira rekupfira kunoitwa neyakavakirwa maweldage. Iyo mhino bhiri yakagadzirwa neyakakomberedza-inoshamwaridzika-mapurasitiki mitsetse. Iyo haina kana chero simbi. Iko kusefa mhedzisiro yeBFE yakakwira se 99%, iyo yakakodzera zvakanyanya kumafekitori emagetsi; inoraswa yakagadziriswa kabhoni masks inoshandisa pamusoro pevhu 28 yejasi risina mucheka, uye yekutanga danda iri mukati inogadzirwa ne antibacterial filter pepa kudzivirira mabhakitiriya ne99%. , Kuti udzivise kukuvara kwehutachiona; yechipiri danga pakati riri rakagadzirwa mhando nyowani yepamusoro-inoshanda adsorption uye kusefa zvinhu zvakadzoreka-yakagadziriswa kabhoni fiber, yakagadziriswa kabhoni jira, iro rine mabasa ekudzivirira hutachiona, deodorization, bacteria kuchera, uye guruva kuvharira;
Masiki anogadziriswa anogadzirwa neakasikwa ane hushamwari epurasitiki mhino bhiriji mitsetse. Iyo yemhino bhiri clip clip dhizaini inogona kushandurwa zvakanyanya zvakanaka zvichienderana nehumwe chimiro chechiso. Iine sarudzo yakasarudzika ye Ultring banga, zvigaro zvemberi zvine simba uye hazvisi kudonha nyore.
Masiki anogadzirwa anogona kushandiswa mukugadzira zvigadzirwa zvemagetsi, magurukota asina guruva, mabasa ekuchekeresa, zvekudya, zvikoro, midhudhudhu, kupuruzira zvinhu, kupwanya machira, electroplating, makemikari, simbi, kushambadzira, hutano nzvimbo, maindasitiri anoshanda nemaoko, zvipatara, Runako, pharmacy, fekitari, kuchenesa zvakatipoteredza, nzvimbo dzeveruzhinji uye zvimwe zvinoshandiswa. Shandisa: hove hura dzezeve panzeve dzose, neine mhando yakazara yemhino, uye zvinyoro zvinyoro pasi isa chimedu chakagadziriswa kugadzirisa, kuitira kuti mask inokodzera kumeso. Chigadzirwa chikuru technical zviratidzo: Carbon tetrachloride adsorption chiyero:> 70% Benzene adsorption chiyero: â ‰ ¥ 15% Moisture kuramba: 80% Nzvimbo kurema: 35 ï½ž 45g / m2 Zviitiko: 1. Saizi: 9CMx17.5 2. Chigadzirwa.
Zvese zvinhu zvine mativi maviri, seiko zvinoita masks ekurasa. Iyo ine zvimwe zvakanakira uye zvimwe zvakashata:
Betsero: yakanaka kwazvo yemweya kubvumirwa; inogona kusefa magasi ane muchetura; kugona kudziya; inogona kutora mvura; iva asina mvura; vane elasticity; kwete zvakashata; kunzwa zvakanaka kwazvo uye zvakapfava; achienzaniswa nemamwe masks, iwo akagadzirwa ari akareruka; Kunyatsochinja, kunogona kuderedzwa mushure mekutambanudza; mutengo wakaderera, wakakodzera kugadzirwa nemazhinji;
Dismukanas: Compared with other fabric masks, disposable masks cannot be cleaned; because the fibers are arranged in a certain direction, they are easier to tear; compared with other textile masks, the strength of disposable masks and Durability is worse than other masks.
Kune mhando dzakasiyana dzemasaizi eguruva dzinogoneka, idzo dzinofanirwa kuve dzakasarudzwa zvinoenderana nezvakasiyana zvekushandisa zvinodiwa uye mamiriro ekushanda.
Chisarudzo chekutanga chinofanirwa kuve chiri pamusoro pekushushikana uye kutyisa kweguruva. Sekureva kwa GB / T18664 "Sarudzo, Shandisa uye Kugadzirisa Zvekuchengetedza Zvinogadzirwa", sehafu masks, ese guruva rinofema rakakodzera nharaunda uko kusangana kwezvinhu zvinokuvadza hakupfuuri kakapetwa kagumi kupetwa kwebasa. danho rekudzivirira rinofanira kushandiswa Yakakwirira kufema.
Kana iyo chinhu chechikonzero chine chepfu zvakanyanya, carcinogens, uye radioactive, mafirita zvigadzirwa zvine hunyanzvi hwekutsvaira kwemukati zvinofanirwa kusarudzwa.
Kana iyo chinhu chechikamu chine oiri, ive shuwa kusarudza sosi yakakodzera yefaira.
Kana iyo chinhu chechikamu chiri shuwa-yakagadzirwa machira, senge slag mvere, asbestosi, girazi fiber, nezvimwewo, sezvo guruva risingagoni kushambidzwa, iyo mask ine microfibers pairi ichaita nyore kukasira kwechiso kumeso kwechisimbiso, uye isina kukodzera kushandiswa.
Kune yakakwirira-tembiricha uye yakakwirira-humidity nharaunda, kusarudza mask neine mweya wekuputika kunowedzera kugadzikana. Kusarudza masiki iyo inogona kubvisa ozone kunogona kupa imwezve dziviriro kune welding. Nekudaro, kana iyo ozone yekushungurudzika yakakwira kakapetwa kagumi iyo yebasa rezvehutano standard, unogona kutsiva mask. Uturu unobatanidza chinhu chechinhu. Nezvemamiriro ekunze uko pasina chinhu chemukati asi zvimwe zvinonhuwirira, zvakareruka kusarudza guruva remarara rine yakagadziriswa kabhoni kasi pane gasi mask, senge mune mamwe marabhoritari enharaunda, asi nekuda kwemazinga emunyika, hapana hunyanzvi hwekuita. kutaurwa kwerudzi urwu rwemask.
1. Geza maoko ako usati wakapfeka mask.
2. Bata tambo yenzeve nemaoko maviri, iine dema rerutivi kunze (bhuruu) uye yakareruka nzira mukati (suede chena).
3. Isa rutivi rwe mask kana waya (chidimbu chidiki chehurema) pamhino, pini waya maererano neako mhino, uye wobva dhonza iyo mask pasi rese kuti ifukidze muromo nemhuno zvachose.
4. Masiki anogadziriswa anowanzo kutsiviwa kwese kwemaawa masere, uye haagone kushandiswazve.
1. Ndokumbirawo kuti ushandise zvinoshandiswa masks mukati menguva yekuvimbika.
2. Chete yekushandisa chete-yenguva imwe chete, paradza mushure mekushandisa.
3. Iko kurongedza kwakakanganisika uye zvinorambidzwa kuishandisa.
4. Teerera kune zuva rekugadzira.
Masks anoraswa anofanirwa kuchengetwa mukamuri rine humidity isingadariki 80%, isina gasi gasi, uye inofefeterwa zvakanaka kudzivirira kupisa kwakanyanya.
MunaFebruary 2020, mutengesi akatenga masendi matanhatu emanyepo uye mashoma akaderera, akagovera iwo ega, uye akazopedzisira avatengesa nemutengo we3 yuan imwe neimwe; uye mutengesi akatengesa 1,06 miriyoni dzenhema uye masiki asina kunaka mukati mehafu yezuva. Yakatengesa kunze uye yakaita purofiti ye450,000 yuan.
Aya masiki enhema uye akaderera ane matambudziko ari pachena emhando, chete hutete hwakatetepa uye hunhu husina kunaka. Panguva ino ndiyo nguva yakakomba yekudzivirira uye kutonga, kupfeka nhema uye masiki asina kunaka kuchaunza njodzi huru dzekuchengetedza. Masiki enhema ane zita rimwe chete- "Piao An". Parizvino masheti ekunyepedzera "Piao An" akaonekwa munzvimbo dzakawanda munyika.
Henan Piao'an Co, Ltd., iyo inogadzira masiki "Piao'an" masks, inowanikwa muChangyuan County, Henan Province, inova imwe yemidziyo mitatu yedhiicai bas. Kubva muna Ndira 28, iyo WeChat yeruzhinji nhoroondo yeHenan Piao'an Group Co, Ltd. yakapa chirevo chakatetepa, ichiti masiki fake uye akadzvinyirira pamusika haisi kugadzirwa kwayo, uye vatengi vanofanirwa kutaurira munguva yakakodzera. maitiro.
Statistics inoratidza kuti kusvika ikozvino, Qingdao, Shandong, Jining, Rizhao, Linyi, Dazhou, Yibin, Zigong, Nanchong, Benxi, Liaoning, Huangshan, Feidong, Guzhen, Anhui, Linxia, ​​Putian, Yangzhou, Jiangsu, Luohe, Nanyang, Henan Chibi muHubei, Changsha kuHunan, Yiyang kuHunan, neHuangpu muShanghai, nezvimwewo, vese vakapindira kuti vaongorore pamwe nekugadzirisa masiki enhema uye akaderera ari manyepedzero.
MunaFebruary 2020, Sichuan Neijiang akabata anopfuura 500,000 maSanwu masks. Hubei Xiantao tsotsi tsotsi Guo Moumou uye Neijiang mukadzi Liu Moumou akatenga uye akatengesa â € œThree Wusâ € kuburikidza neInternet asina hunhu hwakakodzera. Pakupinda munzvimbo iyi pasi peutongi hwaNejiang, maski akaverengeka akashamisika nemapurisa uye akasungwa ipapo ipapo nemapurisa, uye nyaya iyi yakayerekwa nemhosva dzekutengesa zvekushandisa zvekurapa izvo zvisingaenderane nemitemo.
Inorasa matatu-musango-isina-kusuka maski